QM Oo Kulan Gaar Ah Ka Yeelanaysa Xaaladda Somalia | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta QM Oo Kulan Gaar Ah Ka Yeelanaysa Xaaladda Somalia
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo Maanta oo tallaado waxaa lagu wadaa in kulan gaar ah oo Albaabada u xiran yihiin ka yeeshaan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya oo haatan u muuqata mid Cakiran.
Kulanka Golaha Ammaanka ayaa inta uu socdo waxaa aad loogu falanqeyn doonaa xaaladda dalka iyo khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada ka dhaceysa dalka , waxaana kulankaas codsatay Boqortooyada Ingiriiska.
Kulanka ayaa waxaa lagu wadaa in lagu gaaro go’aanka Qaramada Midoobay ee ku aadan arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashada, isla markaana la diyaarin doono qorshe siyaasadeed, si looga fogaado qalalaaso ka dhaca dalka oo ay xaalad ka jirto.
Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Stephane Dujarric oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay inay weli fursad u arkaan inay kulamo xal raadin ah yeeshaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida, si xal looga gaaro khilaafka taagan.
“Qaramada Midoobay waxa ay weli u aragtaa in ay kulmi karaan hoggaamiyaasha Soomaalida oo ay u heelan yihiin dhowrista nidaamka, waxa ay si adag uga wada shaqeeyeen dhisidda hay’adaha dastuuriga ah” ayuu yiri Stephane Dujarric.
Kulanka Golaha Ammaanka ayaa waxaa ku imaanaya, iyadoo shalay uu dhammaaday muddo xileedka Madaxweyne Farmaajo, ayna Musharaxiinta shaaciyeen in Farmaajo aysan Madaxweyne u aqoonsaneyn wixii ka dambeeyay 8-da bishaan Febraayo.